RW Saacid oo shaaciyey in uu jiro khilaaf siyaasaddeed oo u dhexeeya isaga iyo madaxweynaha dalka – Radio Daljir
Nofeembar 12, 2013 5:54 b 0
Muqdisho, November 12, 2013 – Ra?isal wasaaraha Jamhuuriyada federaalka ah ee Soomaaliya mudane Cabdi faarax shirdoon saacid ayaa maanta shaaciyey in uu jiro khilaafka u dhexeeya isaga iyo madaxweynaha dalka, waxaase uu ku tilmaamay mid ku salaysan arrimaha dastuurka iyo habka loo kala shaqaynayo.
Mudane Saacid ayaa qoraal war-gelin ah u diray shacabka Soomaaliyeed maanta oo Salaasa ah, isagoo sheegay in loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed ay sii wataan doorkooda nabbada, wadaninimo iyo horumarka dalka, waxaa uu sidoo kale xukuumada ugu baaqay in ay howshooda sii wataan.
Waxaa xusid mudan in bishaan November 2013, ?ay tahay sanadguuradii kowaad ee dhismaha Dawladda Federaalka ee Soomaaliya. Inkastoo marxalad adag iyo caqabado badan ay jireen hadana muddada kooban ee halka sano aheyd oo ay dawladdeena dhisneyd waxay gaartay guulo waaweyn iyo waxqabad muuqda gaar ahaan dhinaca amniga, dib-u heshiisiinta, maamulka iyo kobcinta dakhliga dawladda, waxbarashada, xoojinta siyaasadda arrimaha dibada, dhismaha haykalka dawladda iwm.
Inkastoo waxqabadka iyo hormarka aan kor ku xusay iyo wadashaqeyn waanaagsan ay ku dhammaatay sanad-guuradii kowaad, anoo ka xun waxaan ku wargalinayaa ummadda Soomaliyeed in uu dhab yahay is-maandhaafka la maqlay oo ka dhaxeeya aniga iyo Madaxweynaha. Is-maandhaafkaas ma?ahan mid siyaasi ah ee waa mid Dastuuri ah, xalkiisuna waa fahamka iyo ku dhaqanka Dastuurka Qaranka.
Waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaliyeed iney ku kalsoonaadaan Madaxdooda iyo Xildhibaanada Golaha Shacabka oo ayagu leh mas?uuliyadda kowaad ee xal u helidda is-maandhaafkaan.
Ugu dambeyn, maadaama ay horyaalaan wadanka marxalado adag gaar ahaan dhanka amniga, waxaan farayaa hay?adaha dawladda oo dhan in ay wataan howshooda qaran, siina laba jibbaaraan adkeynta nabadda iyo habsami u fulinta howlahoodaa. Sidoo kale, waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed iney sii xoojiyaan doorkoodi ku aadanaa wadaninimada, nabadda, iyo hormarka dalka.
Midowga Afrika oo boggaadiyey kordhinta AMISOM iyo tayeynta ciidanka dowladda Soomaaliya